Raha toa moa ka ... tantara mampalahelo : comments » What if ...
Friday, November 7, 2008 - 21:08:50
Mampalahelo tokoa izany tantara izany … indrindra ilay zanaka nahafaty ray aman-dreny !!! Ny todim-pady aza manody fa ny todim-paty manodiava :-P
Ilay tsy mahay miteny Frantsay … Mampalahelo aloha ilay hoe tsy maitsy mahay miteny frantsay, ary mety tsy mila mahay miteny gasy akory ! Fa ilay vehivavy ohatra ny tsy mampalahelo ahy - ankoatra ilay fomba fitenin’ilay vazaha hoe k’elle retourne zouer au foty bal.
TOP 5 ... Ireo Filohan'ny Repoblika malagasy. »
« Raha toa moa ka ... Miasà, miasà mafy, miasà tsara.